Ny fivarotana kosmetika tsara indrindra any New York (I) | Vaovao momba ny dia
Cosmetika, iray amin'ireo fividianana tena ilaina any New York
New York dia paradisan'ny mpivarotra. Amin'ny ankapobeny, miavaka ny fividianana akanjo, fa ny vehivavy koa ho afaka hahita iray manontolo Fivarotana kosmetika sy makiazy tsy misy farany hahafaly anao izany. Mba hahafahanao mankafy traikefa tanteraka amin'ny fividianana an'ity karazana vokatra ity; Manaraka izany, manolotra anao ny lisitry ny fivarotana tsara indrindra amin'ity karazana tanàna ity izahay.
Ao amin'ny Times Square, miavaka izy io, amin'ny ankapobeny, Sephora, fivarotana kosmetika feno marika marobe ary izany, mazàna dia tototry ny mpanjifa. Ao anatiny dia azonao atao ny manandrana ranomanitra, menaka, kosmetika ary makiazy ary, ho fanampin'izany, hahatsapa ho afaka ianao amin'ny alàlan'ny fijerena fotsiny. Izy io, tsy isalasalana, dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hividianana kosmetika any New York, indrindra noho ny vidiny.
Amin'ny làlambe Fifth, fitsidihana an'i Bergdorf Goodman, toerana misy katalaogin'ny fofona manitra be. Mazava ho azy fa mirona hanana vidiny lafo kokoa izy ireo, satria miasa amin'ny orinasa lehibe izy ireo, saingy mendrika ny hijerena izany.
Amin'ny 1657 Broadway, mora ihany koa ny miditra Duane reade, toerana izay ahitanao ny makiazy mora vidy indrindra any New York City. Ary koa, raha tianao ny hanao hoho, dia misy tsipika poleta feno dia feno izy ireo.
Safidy hafa tena tsara hividianana makiazy koa Saks Fith Avenue, rojom-barotra izay manana zavamaniry iray manontolo natokana ho an'ny karazana vokatra hatsarana rehetra: ranomanitra, menaka, makiazy snsetera lava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny fivarotana kosmetika tsara indrindra any New York (I)
Paraty, amin'ny morontsiraka avaratr'i Brezila
Grimselpass, ilay lalana mampitolagaga indrindra any Soisa